2021 Maguta Akanakisa eUS Kupemberera Chechina Chikunguru
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Kuputsa US News » 2021 Maguta Akanakisa eUS Kupemberera Chechina Chikunguru
Kuputsa Kufamba Nhau • Kuputsa US News • Culinary • tsika nemagariro • Hospitality Industry • nhau • Kutarisirwa • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Vanhu vanowanzo kuungana pamwe chete kuzororo gore rino, nepo kuremara kwemagariro kwaive kwakajairika gore rapfuura.
Mamirioni makumi mana emamiriyoni eAmerica achafamba mamaira makumi mashanu + kubva kumba kweva48th yaJuly.
MaAmerican anoronga kushandisa $ 7.5 bhiriyoni pa4th yaJuly chikafu.
64% yevaAmerican vanonzwa kuzvimiririra mune zvemari musi wa4 Chikunguru.
NavaAmerican vachironga kuti pamwe vashandise $ 7.5 bhiriyoni pa4th yekupemberera kwaChikunguru gore rino, nyanzvi dzekufambisa nhasi dzaburitsa mushumo wenzvimbo dza2021 dzeNzvimbo Dzakanaka & Dzakanyanya Kupfuura dzeMana waChikunguru waJuly, pamwe chete nematanho anonakidza nezvehoridhe iri muCoronavirus uye 4th yaJuly Ongororo.
Kuona nzvimbo dzakanakisa dzekupemberera chiitiko chakanyanya-nyereredzwa nenyeredzi, nyanzvi dzakafananidza maguta zana makuru eUS zvinoenderana nemabatiro avanoita zororo uye mafaro. Iyo data seti yemakumi maviri nematanhatu metric masekisheni kubva paavhareji doro uye waini mitengo kusvika pakureba kwemafiratifomu anoratidza kune yechina yaChikunguru mamiriro ekunze.
Maguta Akanakisa Kupemberera Chechina Chikunguru
1. New York, NY 11.New Orleans, LA
2. San Francisco, CA 12.Las Vegas, NV
3.Chicago, IL 13. Buffalo, NY
4. Minneapolis, MN 14.Orlando, FL
9. San Diego, CA 19 Dallas, TX
4 yaJuly Chokwadi & Zvimiro
$ 7.5 Bhiriyoni: Amount Americans anoronga kushandisa pa4th yaJuly chikafu.
Mamiriyoni 150: Huwandu hwembwa dzinopisa dzakadyiwa imwe neimwe 4th yaJuly.
$ 1.4 + Bhiriyoni: Amount Americans anoronga kushandisa pa4th yaJuly doro newaini.
80%: Kugovana kwenzvimbo dzemoto mafirita ekuratidzira ayo akamiswa muna 2020 nekuda kwedenda.
$ 1.5 + Bhiriyoni: Mari inofungidzirwa yakashandiswa pamoto muna 2020 (73% yekukuvara kwemoto kunoitika mukati memwedzi waChikunguru 4).
$ Miriyoni 6.7: Kukosha kwemireza yeAmerica inotengeswa gore rega rega.
Mamiriyoni 48: Huwandu hwevanhu vanofamba makumi mashanu + mamaira kubva kumba kweva50th yaJuly.
Ongororo Dzakakosha Zviwanikwa
Kufamba kuri kutora. 37% mamwe maAmerican achafamba uyu 4th Chikunguru achienzaniswa negore rapfuura.
Fireworks haina kukosha. 62% yevaAmerican havafunge kuti hurumende dzemunharaunda dzinofanirwa kushandisa mutero wemadhora kune mafiratwork anoratidza gore rino.
Kuzivisa rusununguko rwemari. 64% yevaAmerican vanonzwa kuzvimiririra mune zvemari musi wa4 Chikunguru.
Kuchengetedza vs. kushandisa. 62% yevaAmerican vanodavira kuti kuchengetedza mari kuri kunyanya kuda nyika pane kuishandisa.
Kuwedzera kweRusununguko Zuva kushandisa. 36% yevaAmerican varikushandisa mari yakawanda musi wa4 Chikunguru ichienzaniswa negore rapfuura.
Around 36% yevaAmerican vanoronga kushandisa imwe mari pane iyo 4th yaChikunguru gore rino zvichienzaniswa negore rapfuura. Izvi zvinoratidza kuti vanhu vanowanzo kuungana pamwe chete kuzororo gore rino, nepo kuremara kwemagariro kwaive kwakajairika gore rapfuura. Nepo vanhu vakaodzwa mwoyo nekufamba gore rapfuura kune ivo vanath yaChikunguru, 37% vamwe vekuAmerican vachafamba gore rino.
Nhau dzinokurudzira ndedzekuti 64% yevaAmerican vanonzwa kuzvimiririra mune zvemari iyi 4th yaChikunguru, izvo zvinoratidza kuti tiri kupora kubva mukukuvara kwakaitwa nedenda re COVID-19. Pasina ese matanho ekusimudzira anotorwa nehurumende kutsigira vanhu nemabhizinesi madiki, huwandu hwevanhu vanonzwa kuzvimiririra mune zvemari hungangodaro hwakaderera zvakanyanya.
Around 62% yevaAmerican vanotenda kuti kuchengetedza mari kune nyika yekuda kupfuura kuishandisa izvozvi, zvine musoro nekuti vanhu vazhinji vakaponeswa nedenda. Vanhu vanovakazve mari yavo vanogona kunge vasingavimbe nerutsigiro kubva kuhurumende, iyo inosunungura zvimwe zviwanikwa kuti nyika ishandise zvimwe zvinhu zvakakosha, sehutano hweveruzhinji nezvivakwa. Kushandisa mari kunogona zvakare kuve kuda nyika, zvakadaro, nekuti zvinomutsiridza hupfumi uye zvinobatsira nyika kukura.
Around 62% yevaAmerican havafunge kuti hurumende dzemunharaunda dzinofanira kushandisa mutero wemadhora kubhadhara mafiratwork inoratidza iyi 4th yaJuly. Ipo ivo vachionekwa senge chikuru che4th yekupemberera kwaChikunguru, mafireworks zvinhu zvepamusoro, uye vanhu vangatoona madhora avo emitero achienda kuzvinhu zvakakosha sezvo nyika ichipora kubva kuchirwere cheCOVID-19.
IATA inotsigira European Dhijitari COVID Chitupa se ...
Emirates hama itsva ine hutano muSouth Africa inonzi ...
WHO & IATA: 3rd Wave yeCOVID yekupararira nekukurumidza ...
Israel inoisa tsika nyowani inotyisa yekuvhara kushanya ...
Hutachiona uye Tourism zviri kuwedzera muHawaii
Tropical Dutu Elsa inosiya Jamaica ne $ 803 mamirioni ...
Guta revatumwa riri pasi pe COVID-19 kuwedzera kwechitatu ...
JetBlue inotangazve nendege dzisingamire kubva kuSan Jose kuenda kuNew ...